Baolina kitra eoropeana :: Mihemotra roa ambin’ny folo volana ny Euro 2020 • AoRaha
Baolina kitra eoropeana Mihemotra roa ambin’ny folo volana ny Euro 2020
Nandray fepetra ny hampihemotra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa taranja baolina kitra na ny Euro 2020 ny Kaonfederasiona eoropeana (UEFA), taorian’ny fivoriana niarahan’izy ireo tamin’ny solontenan’ireo firenena mpikambana dimy amby dimampolo, omaly. Raha tokony hatao amin’ny 12 jona hatramin’ny 12 jolay 2020 io fifaninanana kaontinantaly io dia hahemotra roa ambin’ny folo volana (11 jona – 12 jolay 2021), araka ny tolo-kevitra nivoaka tamin’ity fivoriana maika ity.
Mifandray amin’izany, ireo lalao sakana hiadiana ny tapakila amin’ny Euro 2020 tokony hatao amin’ny faran’ ny volana marsa dia hihemotra amin’ny fotoam-pialan-tsa­satra iraisam-pirenena, amin’ny fiandohan’ny volana jona 2020. “Miankina amin’ ny fivoaran’ny valanaretina Coronavirus anefa izany”, araka ny voalaza.
Hanomboka amin’ny volana avrily ho avy izao kosa ny fanonerana ny volan’ ireo efa nividy tapakila hia­trehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, tamin’ ny alalan’ny mailaka sy ny tambajotran-tserasera. “Ho an’ireo rehetra tsy afaka mijery ny Euro amin’ny taona 2021 no tsy maintsy honerana amin’izany”, hoy ny UEFA.
Hahemotra amin’ny fotoana mbola tsy voafetra kosa ireo fifaninanana rehetra ho an’ny klioba sy ireo lalao ara-pirahalahiana sokajy lehilahy sy vehivavy, tokony hatao amin’ny faran’ ny volana marsa. “Holazaina amin’ny fotoana manaraka ny fotoana hamindrana azy ireo”, araka ny fanapahan-kevitra.
Voakasik’ity fampihemorana amin’ny fotoana tsy voafetra ity ihany koa ireo fifaninanana kaontinantaly roa ho an’ny klioba (Uefa Champions League sy ny Europa League). “Ho fantatra amin’ny herinandro ho avy ny antsipiriany amin’izany fanapahan-kevitra izany”, araka ny voalazan’ny fanambaràn’ny Uefa.
Fakàna an-keriny :: Maty voatifitra teo am- pitsoahana i Tidakely
Baolina kitra – « Orange Pro League » :: Mikatona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny kianjan’i Vontovorona